2 maitiro ne Microstation: Kugadzirisa zvakakanganiswa mafaira nezvinetso neDWG 3D
Dambudziko 1. Iyo DGW 3D faira inovhura sekunge yaingova 2 saizi Izvo zvakajairika kuti kana uchivhura iyo 3D faira muDWG fomati, ine Microstation, inovhura sekunge yaingova nemaviri chete. Izvi zvinoitika nekuti Microstation inowanzo gadzirirwa mune yayo sarudzo, iyo mbeu faira (mbeu), yakaenzana ne ...
Nzira yekuenzanisa kuchinja kune faira reCAD
Chido chinowanzoitika ndechekugona kuziva shanduko dzakaitika kumepu kana kuronga, tichienzanisa sezvazvaive zvisati zvagadziriswa kana sebasa renguva, mumafaira eCAD akadai seDXF, DGN uye DWG. Iyo DGN faira ndeye Microstation's zvine chekuita uye yemuno fomati. Kupesana nezvinoitika ne ...
Putsa pasiwedhi pamusoro VBA makro Microstation
Visual Basic yeApplications akateedzana emaraibhurari ayo Microsoft akaita kuti iwanikwe, ingave yechinyakare asi ine simba kwazvo, kunyanya mushanduro dzeOfisi pamberi pa2010. Kunyangwe ichiri kuramba iripo, zviitiko zvakawanda zvave kuitwa muNET nedzimwe nzvimbo. kunyangwe zvakadaro, for frame-based budiriro, VBA iri ...
Matambudziko e Microstation 8.5 mu Windows 7
Vaya vanotarisira kushandisa Microstation 8.5 nhasi anofanira kushandisa Windows XP pamusoro chaivo michina kubudikidza incompatibilities pamwe Windows 7, zvakatoipa pamusoro 64 matomu. Vanotaura dambudziko rugwaro mupepeti, yandakavasimudzira kare akataura pamusoro asati sei kurigadzirisa, uye naivowo kureva mufananidzo maneja uye ODBC papi. Ngatione kuti vakatsunga ...
Chaicho Modeling Kosi - AutoDesk Kutorazve uye Kuzvitarisira3D
Gadzira madhijitari emhando kubva pamifananidzo, ine software yemahara uye neRapre Mukosi ino uchadzidza kugadzira e ...